Hawaii na -emepere ndị ọbịa maka njem nlegharị anya na iwu ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Hawaii na -emepere ndị ọbịa maka njem nlegharị anya na iwu ọhụrụ
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • HITA • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Kama • News • Iwughachi • Resorts • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Hawaii na -amalite
A ga -eji aka mepere emepe nabata ndị bịara Hawaii Aloha malite na Nọvemba 1.
Gọvanọ Hawaii David Ige kwupụtara taa na Aloha Steeti dị njikere ịnabata ndị ọbịa maka njem na-adịghị mkpa malite na Nọvemba 1, 2021.
Gọvanọ ahụ kwuru na ihe ha hụrụ n'ime izu ole na ole gara aga na -aga n'ihu na ọnụ ọgụgụ obere okwu.
Usoro nlekọta ahụike Hawaii azaghachila, steeti ugbu a nwere ikike ịga n'ihu na mgbake akụ na ụba.
Ige kwupụtara na ọ dị mma ugbu a ka ndị bi na ọgwụ mgbochi ọrịa na ndị ọbịa maliteghachi njem na-adịghị mkpa na steeti Hawaii.
Ma onye njem nleta ma ọ bụ onye bi na ya, a ga -anabata ndị njem ọgwụ mgbochi ọgwụ mgbochi ma chọọ ime njem n'ime obodo na ime obodo naanị maka ikpori ndụ - ma ọ bụ maka azụmahịa - a na -anabata gị ọzọ na Hawaii.
Gọvanọ ahụ kọwara: “Echere m na ihe niile anyị hụrụ n'ime izu ole na ole gara aga na -agba anyị ume na ọnụ ọgụgụ obere okwu na -aga n'ihu. Ụlọ ọgwụ anyị na -eme nke ọma, anyị nwekwara ndị ọrịa COVID pere mpe n'ime ha. Nke kachasị mkpa, usoro nlekọta ahụike anyị azaghachila, anyị nwekwara ike ịga n'ihu na mgbake akụ na ụba. N'ihi nke a, ọ dị ugbu a nchekwa maka ndị bi na ọgwụ mgbochi na ndị ọbịa ka ha malitekwa njem na-adịghị mkpa na n'ime steeti Hawaii. ”
Ọ bụ naanị izu atọ gara aga ka Gọvanọ Ige rịọrọ ndị njem nleta arịrịọ ka ha chere ruo mgbe ha mechara bịa. N'oge ahụ o kwuru nke ahụ iwu mberede maka ịhazi njem ga -anọrịrị ma ọ dịkarịa ala ọnwa abụọ ọzọ.
Njikọ nke ndị nnọchi anya njem, njem, ngalaba ile ọbịa yana ndị na -ere ahịa, ụgbọ elu na ụgbọ ala, na ndị ọzọ na -agbasi mbọ ike ịmalitegharị na Nọvemba 1 yana Onye isi ala na onye isi nke Hawaii Lodging and Tourism Association, Maazị Mufi. Hanneman.
Onye isi ahụ kwuru, sị: “Ọ bụ ezie na anyị ghọtara na a ka nwere nkọwa ndị ekwesịrị ịhazi - na -etinye uche pụrụ iche na ntinye sitere na ndị isi obodo na ozi nke ndị ọrụ ahụike na mpaghara azụmaahịa na -enye - ọkwa a bụ ihe mbụ dị mkpa mbụ ị nweta. akụnụba anyị na -agagharị ọzọ n'enweghị nsogbu na ikpe. Anyị na -atụ anya iso Gov. Ige na ọchịchị ya na -arụkọ ọrụ ịkpụzi ozi doro anya nye ndị na -aga njem na Hawaii mepere emepe maka azụmahịa na njem nwere ike tinyekwa obi ike ọzọ. ”
Dị ka onye isi obodo agwaetiti Hawaii Mitch Roth si kwuo, Aloha Steeti chọrọ “ndị njem ahụike nwere ọgwụ mgbochi ịlaghachi Hawaii ozugbo enwere ike.”
Onye ọ bụla na-efega United States kwesịrị ịnweta ule COVID-19 adịghị mma n'ime awa 24 December 2, 2021